Wasiir Oomaar iyo Wasiir Isloow oo Manata suaalo adag lagu waydiiyay Golaha Shacabka “Shariif iyo Xasan maxaa loogu diiday Kismaayo?”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Wasiir Oomaar iyo Wasiir Isloow oo Manata suaalo adag lagu waydiiyay Golaha Shacabka “Shariif iyo Xasan maxaa loogu diiday Kismaayo?”.
Waxaa maanta ka furmay xarunta Baarlamaanka Soomaaliya kulanka Golaha shacabka , kaas oo ay ka qeyb galayaan wasiirka amniga, Maxamed Abuukar Islow (Ducaale), wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, Maxamed Cabdullaahi Salaad (Oomaar) iyo taliyaha ciidanka Booliska, Cabdi Xasan (Xijaar).
Previous articleXOG Cusub:- Garaadka Gobollada SSC oo ubaxay Addis Ababa Xilli halkaas ay ku kulansan yihiin Cameey iy Dhooba-daareed.
Next articleDAAWO:- Maxaadan ogayn oo Xatooyo ah oo ay Kenya kawadaa Gobolka Gedo? “Qayla-dhaan cusub oo Timid”.